BurmeseBible: ကတိတော် "GOD's Promis" ကြွယ်ဝချမ်းသာစေမဲ့ ဘုရားရဲ့ဂတိတော်
ကတိတော် "GOD's Promis" ကြွယ်ဝချမ်းသာစေမဲ့ ဘုရားရဲ့ဂတိတော်
အာဗြာဟံရဲ့ ဂတ်တော် ၈၈ခု ရှိပါတယ်။ ဂတိတော်များစွာရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘုရားကို အလွန်ယုံကြည်သူများစွာ ..ဆုတောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ ကြွေးကြော်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုတောင်းချက်များ မရပါဘူး။
ဟေဗြဲ ၁၁း၃၉ ကိုဖတ်ပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြသော်လည်း ဂတိတော်ကို အကျိုးကျေးဇူးမခံစားရပါဘူး။ ဒီလို လောကမှာ ယုံကြည်ပါလျှက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးမခံစားရသူများ တွေ့ကြုံဖူးပါသလား။ ချီးမွမ်းခြင်းများစွာလုပ်ဆောင်
ပါလျှက်နဲ့ ဂတိတော်အတိုင်း အကျိုးမခံစားရပါဘူး။ တကယ်ပါ.. ရေရေလည်လည် မှန်ကန်တဲ့ ယုံကြည်သူတွေ အခန်း၃၆ ကနေဖတ်ပါ။ ဘုရားအတွက် အပြက် ရပ်တည်ခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မြေကြီးပေါ်မှာ အကျိုးရလဒ်မရဘူး။ အကြီးအကျယ် ခရစ်တော် ကောင်းမြတ်ခြင်းများ အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးမရပါသလဲ..၊
အခန်းငယ် ၄၀မှာ ..ထိုသူတို့သည် ငါတို့မပါပဲ
သာ၍မြတ်သော ကျေးဇူးကို ကြံစည်တော်မူသည် ..လို့ရေးထားပါတယ်။ သူဟာ ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ အတွက် ငရဲကို လွတ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ငါတို့မပါပဲ စုံလင်ခြင်းမရှိ ဆိုလိုတာကတော့ .. သူရဲ့ စုံလင်ခြင်းဟာ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင် ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာ အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ စုံလင်ခြင်းရောက်မယ် လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ထိုသူဟာ ဒီမြေကြီးပေါ်မှာ အကျိုးခံစားမှုမရှိပေမဲ့ အပေါ်ဘ၀ ကောင်းကင်ဘုံမှာ သူ့ရဲ့ အထူးစုံလင်ခြင်းကို ရပါမယ်။ သူဟာ မြေကြီးပေါ်မှာတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ချီးမွမ်းပေမဲ့ သာ၍အဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်။ အရှက်ကွဲခံရပြီး၊ ချီးမွမ်းနိုင်ပေမဲ့ ပိုပြီးအရှက်ကွဲရတယ်။ ဒါတွေကို ဒီလောကမှာ ခံနိုင်တယ်။ ဒီ မြေကြီးပေါ်မှာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ မခံစားရပဲ သေဆုံးသွားရတယ်။ သူ့အတွက် ကောင်းကင်ဘုံမှာ အားလုံးရဲ့ရှေ့ ကောင်းကင်ဆုကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကတိတော်အားဖြင့် ယုံကြည်သူများ မစခံရတဲ့နည်း အကြမ်းဖျဉ်း (၃)နည်း ပြောပါမယ်။
၁။ ငရဲမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်
၂။ မြေကြီးပေါ်မှာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိသည်
၃။ ကောင်းကင်ဘုံကျမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိသည် (မြေကြီးပေါ်မှာမရ) ..တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယုံကြည်သူများ ဆုတောင်းရင်လည်း ချက်ခြင်းမရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဘုရားရှင်က သင့်ကို ကောင်းကင်ဘုံအတွက် ချန်ထားဖြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(yawhantone16@yahoo.com မှရရှိသော Scripture ကို မြန်မာမှုပြုသည်)။
And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world’s corruption caused by human desires.၂ပေ၁း၎ ထိုသို့သော အားဖြင့်လည်း အလွန်ကြီးမြတ်၍အဘိုးထိုက်သော ဂတိများ ကို ငါတို့၌အပ်ပေး တော်မူပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုဂတိတော်များကိုအမှီပြု၍ သင်တို့သည် လောကီ တပ်မက်ခြင်း အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းလွတ်သဖြင့်၊ ဘုရားပကတိကိုဆက်ဆံရသော သူဖြစ်ကြမည်အကြောင်း တည်း။
ယေရမိ ၂၉း၁၁ တဖန် မိန့်တော်မူသည် ကား၊ ငါသည် သင်တို့ကို အကျိုးနည်းစေခြင်းငှါ၊ ကြံစည်သော အကြံမဟုတ်ဘဲ၊ သင်တို့သည် မြော်လင့်သော အကျိုးကို ရမည်အကြောင်း၊ ငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှါသာ၊ သင်တို့အဘို့ ကြံစည်သောအကြံတို့ကို ငါသိ၏။
“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.မသဲ ၁၁း၂၈-၂၉ ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသော သူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ ငါ့ထမ်းဘိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၍ နည်းခံကြလော့။ ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသော စိတ်သဘောရှိ၏။ သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကို ရလိမ့်မည်။
They will walk and not faint.ဟေရှာယ ၄၀း၂၉-၃၁ ထိုဘုရားသည် မောသောသူတို့အား၊ ခွန်အားကို ပေးတော်မူ၏။ နွမ်းနွယ်သော သူတို့အား၊ အစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ လူပျိုတို့သည် မော၍ ပင်ပန်းခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ လုလင်တို့သည်လည်း ထိမိ၍ လဲကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မျှော်လင့်သော သူတို့မူကား၊ အားပြည့်ကြလိမ့်မည်။ ရွှေလင်းတကဲ့သို့ မိမိတို့အတောင်ကို အသစ်ပြုပြင် ကြလိမ့်မည်။ ပြေးသောလည်းမပင်ပန်း၊ ခရီးသွားသောအခါ မမောရကြ။
ဖိလစ်ပိ ၄း၁၉ ငါ၏ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းအာနုဘော်၌ စံပယ်တော်မူသော စည်းစိမ်ရှိ သည်အတိုင်း၊ သင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကို ယေရှုရစ်အားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်။
ရောမ ၈း၃၇-၃၉ မကွာစေသည်သာမက၊ ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၊ ငါတို့သည်ထိုအမှုခပ်သိမ်းတို့ကို ခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင် မြင်ကြ၏။ ၃၈အကြောင်းမူကား၊ သေခြင်းဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ၊ အထွဋ်ိအမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာတန်ခိုးဖြစ်စေ၊ မျက်မှောက်အရာဖြစ်စေ၊ နောင်လာလတံ့သောအရာဖြစ်စေ၊ အမြင့်ဖြစ်စေ၊ အနိမ့်ဖြစ်စေ၊ ဤအရာမှစ၍အဘယ်နိမ္မိတအရာမျှသည်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ခံရသော ဘရားသခင်၏ မေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင် ဟု ငါသည်သဘော ကျလျက်ရှိ၏။
သတ္တံ ၁း ၃၃ ငါ့စကားကိုနားထောင်သောသူ မူကားလုံခြုံစွာနေ၍၊ ဘေးကိုမကြောက်ဘဲ ငြိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄း၂၇ ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ လောကီသားတို့ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။
If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. ရောမ ၁၀း ၉အဘယ်သို့နည်း ဟူမူကား သင်သည် သခင်ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုသေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ရောမ ၆း၂၃ အပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင် ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူး တော်ကား၊ ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရအသက် ပေတည်း။
Read more: http://www.whatchristianswanttoknow.com/the-promises-of-god-10-powerful-bible-verses-1/
Posted by Witmone at 4:48 PM